> Resource > Video > Jaycut - Sida loo Isticmaalo Free Online Video ayeey Software Jaycut
JayCut waa online video editor free ah flash-ku salaysan, si la mid ah Yahoo! 'S Jumpcut (hadda la xiray). Waxay dadka u saamaxaaya in ay geliyaan video, audio iyo ka badan si loo abuuro "keegag" ama filimada. The feature ugu fiican waa in aad si Qalabka telefoonada gacanta, PC iyo YouTube dhoofin karo videos. Ilaa iyo hadda, waxa uu tixgeliyo sida ugu wanaagsan ee online video editor oo waa uu ku fiican oo ka wanaagsan tan iyo markii la sii daayay sanadkii 2007.
JayCut uu leeyahay wax walba oo aad u baahan tahay tijaabo ah video tafatir oo lacag la'aan ah, oo ay ku jiraan default videos, sawirada iyo maqal ah. Waxaad xitaa uma baahnid inaad iska diiwaan gelin si ay u isticmaalaan dhammaan hawlaha. Si kastaba ha ahaatee, mar diiwaangashan, waxaad ka heli xor ah oo fudud si ay ula wadaagaan filimada qoyska iyo saaxiibada.
Online video editor dib u eegis JayCut
Faa'iido : JayCut sameeya oo dhan oo aad ka fekeri karto in bog web hal. Dhab ahaantii, waxa ay aniga iyo saaxiibaday amazes. Waxaan jeclahay wax walba oo ku saabsan internetka. Waa user saaxiibtinimo oo kuu ogolaanaya in aad geliyaan noocyada kala duwan ee warbaahinta si dhakhso ah, oo markaas iyaga wada qaso. Qodan ayaa waxa uu noqonayaa in ka badan oo shaqo ah ee farshaxanka iyo hal dareensan dareen lahaansho markay ku daray koob, kala guurka iyo music inay sawiro ama video. Ugu dambayn waxaan jeclaan xaqiiqada ah in qof kasta oo abuuri isaga ama iyada page profile u gaar ah. Profile ayaa waxa ay ka dhigaysaa hab madadaalo ah oo ku saabsan barashada dadka kale iyo waxa uu noqon karaa mid xiiso leh sababtoo ah waxa ay la mid tahay Facebook ama MySpace.
Qasaarooyinka: Haddii dadka ka fili lahayd dheeraad ah, waxaa laga yaabaa in ay horumariyaan kooxda ku dari karaysaa kala guurka dheeraad ah iyo saamaynta qoraalka, iyo ku habboon baahida ay u dhoofiyaan si facebook iyo doorasho in ay doortaan adeega DVD.
Gunaanad: Jaycut waa deg deg ah oo si sahlan loo isticmaalo website video editor. Waa xiiso leh iyo is-dhexgal. Design waa si dareen leh in dadka si fudud u fahmi karaan sida loo isticmaalo wax kasta website waxay bixisaa.
Sida loo isticmaalo Online Video Editor JayCut
Al dhex JayCut waa fiican fududahay in la isticmaalo, waxaad heli kartaa bilowga deg deg ah ka hor isku dayaya this video online editor gabi ahaanba bilaash ah.
Tallaabada 1. Import Media ka PC, Microphone iyo webcam (gudub talaabadan ugu horeysay Haqoosna maxkamad default warbaahinta bixiyo)
Tallaabada 2. Add Video / Images / Audio in Timeline
Tallaabada 3. shakhsiyeeyo filimada la kala guurka, qoraalka
Tallaabada 4. samaysaa saldhigyo inay ku daray video / audio iyo saamaynta
Tallaabada 5. Save mashruuca ama dhoofinta movie
By jidkii, ka dib markii tafatirka video ah, haddii aad rabto in aad ku gubi videos ay u DVD disc ilaalinta ama qaybsiga ku haboon, waxaad isticmaali kartaa Wondershare DVD Creator ay gubaan videos in DVD si degdeg ah oo loogu talagalay dadka isticmaala Mac, Wondershare DVD Creator for Mac kaa caawin doona inaad badalo videos ka si DVD DVD la bedeley qurux badan.